28 June 2013 - Fante Online
Friday Sermon: Objectives of Jalsa Salana (Annual Convention) - 28th June 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 28, 2013.
(Friday sermon – 28th June, 2013 – Fante Translation)
JALSA SALANA (AFENHYIA EHYIADZI) NO BOTAE.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa ne Fida Nyamesɛmka no fii Germany. Ɔkaa dɛ, Nyankopͻn N’adom ara German Jalsa Salana no hyɛ ase ndɛ na ͻbͻkͻ do ara nda ebiasa. Jalsa Salana kor yi ara so wͻrehyɛ ase wͻ aman binom mu ndɛ, nkanka USA na Kababir na Ameerfo a wͻwͻ dɛm aman yi mu yi wͻ pɛ dɛ wͻbͻ hͻn Jalsa yi ho dawur. Ɔnam dɛ mber a wͻdze yɛ Fida Asͻr wͻ USA na Kababir nye Germany dze no bͻ ebira ntsi, Huzur ne kasae a odzi ewie wͻ Jalsa ne ndansa da nye USA Jalsa n’ewiei no bɛyɛ pɛr ama wͻabɛka Huzur ne kasae a odzi ewiei na tsirmu mpaabͻ a otwa ehyiadzi do no.
Jalsa Salana wͻ amanaman do a wͻyɛ no mber kor no ͻma dͻm a woehyia hͻ no tsie Fida Nyamesɛmka wͻ ne ber no ara mu na ͻnam dɛm kwan yi do ma nsɛm a ofi Nyamesɛm yi mu no du dͻm kɛse do. Mbom dͻm kɛse noara a wͻwͻ Jama’at yi mu tsie dza ͻrokͻ do wͻ Jalsa Salana ne ber no ara mu na Huzur dze n’enyi bu dɛ dodow ara mbuei hͻn kasafir nntsie dza ͻrokͻ do. Mbom nkorͻfo a wofi amanaman binom mu a wohyia wͻ Jalsa Salana no ase no fi mbeambea a mber dzi adanadan naaso wͻtwe hͻn adwen kͻ Fida Nyamesɛmka no do.
Ndɛ Fida Nyamesɛmka yi yɛ nkaakaadze a ͻfa no Jalsa Salana no botae dɛ mbrɛ Anohoba Mɛsia (ANN) kyerɛkyerɛɛ no. Ohia dɛ yɛkaakaa hɛnho ama dza yɛdze hɛn enyiwa esi do ber a Jalsa rokͻ do no, etsim na nsɛm so a woridzi ho ebooboo wͻ ber no mu no ekyir yi wͻdze akͻ nyɛe do. Iyi gyina ankorankor dza hͻn enyi tsim do na hͻn adwen da do ho. Mber yi mu yi nkorͻfo tͻ kͻ wiadze nsɛmansɛma do kwetsir nhyɛ na ma ͻnnyɛ nhyɛ asͻryɛ na dwumadzi bi ho. Nkorͻfo pii kyerɛw dze kyerɛ nsesa nwanwaso a aba hͻn abrabͻ mu na wͻka dɛ wonya atsenka bi dɛ ndansa da no mu no nna wohu dɛ wͻwͻ wiadze fofor mu na sunsum mu nkenyan hyɛ hͻn ma wͻ Jalsa ber no mu. Wͻtotͻ serɛ mpaabͻ dɛ dɛm tsebea yi betsim ama hͻn.
Nokwar, Jalsa ber yi wͻ atsenka na nkorͻfo dua hͻn ankorankor gyedzi do nya nkenyan. Nkorͻfo hͻn werɛ fir bͻ a wͻahyɛ ama Nyankopͻn wͻ Jalsa ber no mu no mber tsiabaa a Jalsa akͻ ewiei no, binom hͻn dze yɛ nda kumaa bi na binom so adapɛm kakra ekyir. Pinara suo mu dzen wͻ bosom kakra ntamu. Iyi yɛ nokwar a ekyingye nnyi mu. Nkorͻfo kumaabi dze Jalsa ahotsewee mu nkenyan no tsena hͻn mu mfe pii. Mbom, ͻnam dɛ dodowara hͻn werɛ fir wͻ mber tsiabaa mu ntsi, Nyankopͻn ahyɛ dɛ wͻnyɛ nkaakaa.
Ɔyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) n’enyimpa dɛ ͻdze Jalsa Salana bͻbͻͻ adze. Obuei hɛn abobow ma yenya ͻdodow nsakyer na yenya kwan nya sunsum mu nsiesie, eso yenya kwan dzi hɛn dwuma na ahyɛdze do. Ndɛ da yi nyamesɛmka no gyina Jalsa Salana no botae dɛ mbrɛ Anohoba Mɛsia (ANN) dze too gua no. Anohoba Mɛsia (ANN) kaa dɛ ͻwͻ dɛ yɛtwe akoma kͻ Ndambankwa do na yenya Nyankopͻn ho suro. Nyimpa wͻdɛ ͻyɛ Zohd (tuhoakyɛ mapa) fasusu, Nyamesuro (Taqwa) ehumbͻbͻr, ahohyɛdo botooyɛ na anyɛnkodͻ. Ahobrase na nokwardzi wͻdɛ yeyi kyerɛ na yɛdze mbͻdzenbͻ yɛ nyamedwuma. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ Anohoba Mɛsia (ANN) ne dɛm nsɛntsia yi a ͻkae yi ma Ahmadiyyanyi nokwarfo nkenyandze ma ͻdze bͻ ne bra. Sɛ yerodwen kasafua ‘Zohd’ ho a nkyɛ yebohu dɛ ͻdze afotusɛm kɛse nam ma sɛ yɛtsena mu a yebotu bͻn egu, na yeegyae atsenka hun dɛ obenyin ma ne nsunsuando ewiei dɛ ndzeyɛɛhun nyinara hͻn mbobow atotow mu. Ɔda edzi dɛ nyimpa nnkotum atsew noho efi wiadze, mbom apɛdze a onndzi mu eso ͻnnsɛ mfata a ͻwͻ wiadze no na ͻwͻ dɛ nyimpa yi no akwa na ͻbͻ noho ban fi ho. Sɛ yeredan no aka a, ͻkyerɛ dɛ, sɛ yeennhu Nyankopͻn N’adͻyɛ pii a ͻwͻ wiadze a nna yɛayɛ etsiafo.
Hadith ka dɛ da kor bi Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’asomfo no kaa dɛ wobedzi mbuada ntoatoado, wͻnnkͻwar eso wͻnnkͻtwi abɛn mbasiafo. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) buaa hͻn see hͻn dɛ, odzii mbuada, ͻyɛɛ asͻr, adae, yɛɛ fie edwuma na ͻawar mbasiafo na nyia a ͻyɛ adze a ͻnye iyinom bͻ ebira no, ͻnnka noho. Ɔkaa dɛ osuro Nyankopͻn kyɛn n’asomfo no na ͻfaa Nyankopͻn Ne pɛ do yɛɛ n’apɛdze.
Nokwar Zohd kyerɛ dɛ wiadze akͻndͻdze nkotsee na onnyi nyimpa n’adwen mu na nyimpa fa wiadze ndzɛmba nkakrankakra. Mbom, sɛ wͻtwe obi kͻ enyigyedze a wiadze Anee afamu dze ma a ͻno Jalsa Salana ne nkͻree yɛ kwa na onndzi mu so dɛ ebɛba Anohoba Mɛsia (ANN) ne Ba’iat ase. Zohd dze nokwar sunsum a ͻwͻ Taqwa mu no hyɛ nyimpa mu. Ampaara dɛ, Zohd ne nkyerɛasee nye dɛ ebͻhwɛ yie amma annyɛ biribi a ͻbͻtwetwe Nyankopͻn N’ebufuw, dɛmara so na ͻwͻ dɛ ehwɛ yie amma annyɛ adze a ͻbɛyɛ obi a edͻ no anaaso wo nyɛnko yaw. Dɛm adze yi si wͻ ber a Nyankopͻn ho dͻ yɛ kɛse sen ͻdͻ biara, na iyi so wͻyɛ a ͻyɛ yie ber a enye Nyankopͻn wͻ nkitahodzi na ewͻ sunsum mu nyimdzii wͻ No ho.
Anohoba Mɛsia (ANN) no ama akwankyerɛ pii a ͻma nyimpa nya dɛm mpɛnpɛndo wͻ Taqwa mu. Ɔkaa dɛ afotu yɛ ehiadze papaapa ma Jama’at hͻn eyiedzi na Nyankopͻn enyi nngye biribiara ho kwetsir Taqwa. Nyankopͻn ka dɛ “Ampaara Allah nye hͻn a hͻnho tsew na wodzi dwumapa wͻ hͻ” (16:129). Afotu ntaataado a ͻkͻdo aber biara no, ber a ereyɛ Ba’iat no yɛka dɛ yɛbͻbͻ mbͻdzen enya Nyankopͻn ho enyigye na yɛabͻ mbͻdzen so edzi Ne mbransɛm no do na yɛayɛ, osiandɛ sɛ yɛammfa annkͻ nyɛe do a, dza yɛka nyinara yɛ nsɛm ara kɛkɛ. Nyiyimu a yɛakyerɛw no wͻ sor hͻ yi kyerɛ Taqwa mu dɛ hͻn a wodzi dwumapa no wͻ Taqwa. Ɔno nye dɛ, hͻn a wͻyɛ papa ma nkorͻfo na wͻwͻ nyimdzii na hͻn nyimdzii no ma wͻtsena Taqwa mu. Anohoba Mɛsia (ANN) no twee hɛn adwen gyinaa Zohd nye Taqwa do na oduaa Nyankopͻn N’asɛm no do maa mfatoho a ͻka dɛ fa woara wo mu atsenka bͻ afͻr ma nkorͻfo.
Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ ͻyɛ ehiadze pͻkyee dɛ ne Jama’at wͻdze Taqwa to hͻn mu osiandɛ wodzi nyia ͻ’agye ato no do dɛ Nyankopͻn na Ɔ’asoma no n’ekyir. Dɛm ntsi dɛ ebɛba ne Ba’at mu no nnyɛ adze bi ara kwa osiandɛ ͻdze ato no do dɛ ofi Nyankopͻn nkyɛn bae. Ɔkaa dɛ nyimpa hͻn nsakyeree nam no do bɛba mu dɛ Nyankopͻn bɛgye ato mu na ͻfa Noho so. Iyi bekenyan ndzeyɛɛpa dɛ mbrɛ Kuran Krͻnkrͻn yɛ no nhyɛ no.
Dɛ obi ayɛ adasamba hͻn asɛdze ama hͻn na ͻwͻ dɛ oyi adwenbͻn nye etsim na akam nyinara fi no mu. Na bɛma w’akoma mu atsew dɛ ahwehwɛ na beyi mbataho (Shirk) nyinara efi wo mu. Sɛ edze wo ho to wiadze yi do a oyi wo fi Nyankopͻn nkyɛn. Sɛ obi ennyi iyinom akwa a onnkotum aka dɛ wͻayɛ Ba’iat a odzi mu wͻ aber a onnyi nyamesuro. Anohoba Mɛsia (ANN) no aka dɛ Nyankopͻn yɛ Ehumbͻbͻr naaso Ɔyɛ Kokroko. Sɛ Ohu dɛ nkorͻfo bi ka nsɛm bi a wͻmmfa nnyɛ edwuma a, ͻhyɛ No ebufuw.
Huzur bͻͻ mpaa dɛ mma yeennya Nyankopͻn N’ebufuwhyew no ara da na mbom yɛnhwehwɛ N’ehumbͻbͻr no. Anohoba Mɛsia (ANN) kyerɛ dɛ tseneneeyɛ gu mu ahorow ebien, dza ͻyɛ nhyɛ na dza yɛdze hɛn pɛ yɛ. Dza ͻyɛ nhyɛ no bi nye dɛ botua Zakat na ayɛ papa, bɛyɛ bi ama no na bɛsan ayɛ ho papa bio. Dɛ bɛyɛ adͻyɛ wͻ aber a etua Zakat ewiei no. Hͻn a wͻyɛ dɛm no Nyankopͻn bɛyɛ hͻn adamfo, Ɔyɛ hͻn nsa nye hͻn anan ara a ma ͻba dɛ Ɔbɛyɛ hͻn tekyerɛma a wͻdze kasa. Obi benya dɛm gyinabew yi wͻ aber a sɛ obi yɛ no papa a, ͻyɛ no adͻyɛ mbordo. Sɛ obiara yɛ dɛm wͻ asetsena mu a, ͻno pɛsɛmankonya befi hɛn mu. Mbom dɛm nkorͻfo no benya ͻdͻ na asomdwee wͻ asetsena mu. Sɛ yɛyɛ iyinom wͻ Nyankopͻn ntsi a, ͻma hɛn ndzenoa wͻ kwan a ͻbor nyimpa adwen do. Ohia dɛ yɛbenya dɛm suban yi.
Ɔwͻ dɛ yɛyɛ asͻr a ͻnnyɛ nhyɛ no ka dza ͻyɛ nhyɛ no ho dɛ yɛdze rohwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Ɔwͻ dɛ yɛyɛ iyinom nyinara wͻ aber a yennyi botae fofor biara wͻ ekyir na mbom yɛdze rohwehwɛ Nyankopͻn Nkotoo N’enyigye. Nyankopͻn enyi nngye asͻr na afͻrbͻ a wͻyɛ no enyido. Nyankopͻn ka dɛ “Mo bͻͻ Jinn na adasamba dɛ wͻnsom Me” (51:57). Na ͻtͻfabi a, dɛm som yi ara bɛyɛ dza ͻnam do dze ͻsɛe ba nkorͻfo bi do. Ɔbɛyɛ obi nwanwa dɛ ͻbɛyɛ dɛn na papayɛ na Nyamesom bɛyɛ kwan a ͻbɛsɛe nyimpa bi. Nyiano ara nye dɛ, Nyankopͻn ahwɛ dɛ tsenenee biara nngyina Nyamesom do. Nyamesuro nyedua n’aba no wͻnnkͻ kwetsir no asom no. Sɛ Nyamesom amma obi ennya tsema nye tsirmbͻbͻr a, nna dwumadzi no ennya no boate. Mfatoho nye dɛ, ͻtͻfabi a, eduadzewa bi yɛ fɛw ara yie wͻ enyido naaso yɛbɛpae mu no na wͻaprͻw anaa no mu aba no nnyɛ papa anaa mpo mbowa edzi anaaso bohu dɛ ͻnnyɛ dɛw. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ aba noho ban, ͻnye dɛ yɛbenya sunsum mu nkitahodzi na yeenya tsema ama adasamba.
Germany Jama’at no tum si asͻrdan anan anaa enum afe biara. Hadhrat Khalifatul Masih buei asͻrdan yi nyinara ano. Ɔkae Jama’at no dɛ hͻn asodzii dͻͻso ara yie wͻ ber a wobesi asͻrdan. Nnyɛ dɛ yɛbesisi asͻrdan ma nkorͻfo aba mu ara kɛkɛ, dza ohia nye dɛ no mu mba no benya tsema na ͻdͻ ama hͻnho hͻnho mma aso hͻn brͻn a wͻtse mu no do. Anohoba Mɛsia (ANN) no pɛɛ dɛ n’asͻrmba benya tsema na ahobrase na ͻdͻ ama hͻnho hͻnho a ͻbɛyɛ fasusu ama nkorͻfo pii. Hɛn ntamu ͻdͻ bͻtwetwe Nyankopͻn No dͻ aba hɛn do na ͻ’ama hɛn nyamesuro na ͻ’ama yɛatwe dͻm aba hɛn nkyɛn. Anohoba Mɛsia (ANN) no bͻͻ mpaa dɛ Nyankopͻn ntsew n’ekyirdzifo no hͻn akoma mu na ͻntwe hͻn mbɛn Ne nkyɛn na Onyi hͻn mmfi basabasayɛ ahorow nyinara ho.
Anohoba Mɛsia (ANN) ne nsɛm a yɛakenkan no kyerɛ dɛ yɛntwe hɛn adwen ngyina ahobrase do. Ahobrase ma nkitahodzipa bɛda hɛn ntamu na ͻtwe dͻm so bɛn hɛn. Nyankopͻn aka dɛ No nkowaapa no nantsew asaase yi do wͻ ahobrase mu (25:64). Dɛm ahobrase yi na ͻtwe hɛn bɛn Nyankopͻn na ͻma asetsenapa so. Anohoba Mɛsia (ANN) no san twe adwen gyina do dɛ obiara a odzi pɛrpɛryɛ do na obiara a odzi tseneneeyɛ ekyir no dzi ndzeyɛɛpa nyinara ekyir. Osiandɛ iyi ara nye nyamesuro no. Na ohia dɛ yɛbͻhwɛ ndzɛmba bi a ͻma tseneneeyɛ tu kafo. Dɛm ntsi na Nyankopͻn atwe hɛn nokwardzi no wͻ ber biara na Ɔ’aka dɛ hom nka kasapa. “O! hom a hom agye ezi, hom nsuro Allah na hom nka kasapa a ͻtsen” (33:71). Huzur kaa dɛ ͻnnkyeree na ͻkasaa faa kasapa ho na ogyinaa Kuran kyɛfa yi do.
Anohoba Mɛsia (ANN) no ayɛ no nhyɛ ama hͻn a wͻba Jalsa Salana no dɛ wͻbɛfa kasapa, nokwardzi na pɛrpɛryɛ do enya sunsum mu mpontu. Sɛ Ahmadiyyanyi biara no nokwardzi gyinabew kͻ kan a, ͻno hom nsɛm benya nsunsuandopa na obotum dze hom nsɛm so apetse akͻ kan. Anohoba Mɛsia(ANN) ne nkyerɛkyerɛ no gyina ndzɛmba ebien bi do; dɛ yɛbɛma adasamba ehu Nyankopͻn na wͻakͻ Ne nkyɛn. Ɔtͻdo ebien, dɛ yɛnye nyimpa bedzi nkitaho dɛ mbrɛ ͻsɛ na ͻfata na yɛdze hͻn ndzenoa nyinara bɛma hͻn. Iyinom nyinara nnkɛba gyedɛ yenya nsakyerpa wͻ hɛn ndzeyɛɛ mu. Yɛronntum ntwe adasamba nkͻ Nyankopͻn hͻ gyedɛ yɛnye No wͻ twaka a no mu yɛ dzen. Yerenntum nsom adasamba gyedɛ yenya ahobrase dobodobo.
Ɔwͻ dɛ yenya ͻdͻ, nokwardzi, koryɛ na afͻrbͻ sunsum ansaana yeetum adasamba. Ɔwͻ dɛ yɛdwen dɛm nsɛm yi ho wͻ nda ebiasa yi mu dɛ mbrɛ ͻbɛma yeetum ayɛ dza Anohoba Mɛsia (ANN) ͻpɛɛ dɛ yɛbɛyɛ no.